Xakamaynta xawaaraha aad videos laga yaabaa in hawl niyad ciyaartoy warbaahinta la heli karo. Haddii aad tahay buff filim ama sports lover ah, aad jeclaan doonaa daawadaan clips jecel si faahfaahsan. Si kastaba ha ahaatee, ma barnaamij kasta oo aad bixisaa gacanta xawaare wanaagsan. Nasiib wanaag, il furan VLC media player waa software weyn u leedahay in loo xakameeyo xawaaraha loo maqli karo ee dhan ah qaabab video . Xakamaynta xawaaraha sidoo kale si fudud oo u baahan qasabno yar ama, keyboard.
Qeybta 1:? Sida loo isticmaalo VLC ciyaaryahan warbaahinta si loo xakameeyo xawaaraha ku daaqadaha
Qeybta 2: Sida loo xakameeyo xawaaraha-isticmaalaya VLC on Mac?
Qeybta 3: Isticmaalka hotkey Motion gaabis ah
Qeybta 1: Sida loo isticmaalo VLC ciyaaryahan warbaahinta si loo xakameeyo xawaaraha ku daaqadaha?
Sida waa il software furan, aad VLC ka soo dejisan kartaa videolan.org ama ilo lagu kalsoonaan karo sida cnet.com ama softonic.com. Download version Mac waxaa ka mid ah. Raac tallaabooyinkan si aad u koontaroosho xawaaraha video isticmaalaya VLC.
1. Launch media player VLC iyo file video furi ka tab warbaahinta ama kaliya labo gool gujinaya faylka.
2. Haddaba tag in Radidiyaha iyo dedeg yahay xawaaraha. Waxaa jira afar doorasho dhaqso, dhaqso (ganaax), xawaaraha caadiga ah, gaabis ah, iyo gaabis ah (ganaax). Dooro xawaaraha gaabis ah ama ganaax gaabis ah sida ay adiga kuu gaar ah sahlo.
Hadda ciyaari video by kulaylinta bar meel ama riixaya badhanka play ah. Waxay qaadan Diintooda labada tallaabo si loo xakameeyo xawaaraha. Isticmaal meel tallaabooyinka inay dib u xawaaraha caadiga ah laakiin la doorto ikhtiyaarka xawaaraha caadiga ah ka menu xawaaraha.
Waxaad xakamayn kartaa xawaaraha aad loo maqli karo video in VLC. Haddii aad u xakamayn kartaa xawaaraha loo maqli karo, waxa ay ka dhigan tahay in aad sidoo kale ka daawan kartaa video ka dhaqaaq tartiib ah ama kaliya waxay si deg deg ah u ciyaaro, sida aad u baahan tahay.
Goobta videolan.org waa meel wanaagsan oo loogu soo degsado ciyaaryahanka warbaahinta VLC. Download version Mac ee VLC ka website. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa ilo sida download. cnet.com iyo softonic.com . Raac talaabooyinka soo socda si loo xakameeyo xawaaraha aad video.
1. Burcad video isticmaalaya VLC media player ama aad uga furi kartid menu Media isticmaalaya fursadaha Open File.
2. Hadda, falgali in Radidiyaha oo la furo fursadaha ka xawaaraha. Waxaad doono labada kala duwanaansho ah oo xawaare gaabis ah oo si dhakhso ah. Isticmaal mid ka mid ah oo aad jeceshahay iyo ciyaaro video ah.
Waxaad ka heli kartaa khalkhal yar haddii aad ciyaaro culus qaab videos kaas oo ay leeyihiin size file in GBS. Waxaad mar walba u ciyaari karaa sida caadiga ah ay u socdaan si ikhtiyaar xawaaraha iyo xulashada xawaaraha caadiga ah.
Haddii aadan rabin in la yara oo taga si bedeley u badan ayuuna video ah, oo aad isticmaali karto hotkeys si loo yareeyo videos ee fudayd. Hotkeys bixiyaan gacanta kuwa aad u fiican xawliga sida ay leedahay badan oo kala duwanaanshaha marka ay timaado ayuuna xawaaraha. Waxaad hoos u dhigi kartaa video ka 1.0x caadiga ah si yar intii .03x oo jira 10 duwanaansho in xawaare.
Isticmaal "[" si aad u yarayso video ah. By cadaadinaya mar Waxay hoos ugu dhaadhici doontaa in 0.9x, mar labaad waxaa si 0.8x iyo wixii la mid ah ku tegi doonaan. Si loo gaaro xawaaraha caadiga ah kaliya ku dhacay "=" iyo video ciyaari doonta xawaaraha caadiga ah.
Sida loo dayactir ".flv faylasha ma soo bandhigeen video" isticmaalaya VLC Media Player?
> Resource > VLC > Sidee loo xakameeyo xawaaraha ku VLC Media Player